Cabsi dagaal oo taagan Magaalada Dhuusamareeb & ciidamada Galmudug oo ku wajahan * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
iidamo taabacsan Galmudug oo saaka ka baxay degmada Cadaado ayaa gaaray duleedka magaalada Dhuusamareeb oo ah xarunta maamulka gobolada dhexe ee ahlu suna.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamadan ay saaka qabsadeen degaanka Mareergur oo ku yaalla inta u dhexeysa Cadaado iyo Dhuusamareeb halkaasoo ay joogeen xoogaga Ahlu sunna.
Xaalada Nagaalada Dhuusamareeb ayaa kacsan, iyadoo ciidamada ahlu suna ay difaacyo ka xirteen goobaha ay magaaladaas kaga soo wajahan yihiin ciidamada Galmudug ee doonaya iney magaalada la wareegaan.
Wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamada Galnmudug ay ku soo biireen qaar ka mid ah maleeshiyadii degaanka Xeraale ee maalmahan dagaalka kula jiray xoogaga Ahlu sunna.
Goob joogayaal ku sugan degaano ka tirsan gobolada dhexe oo xiisadahan la socda ayaa sheegaya iney suuragal tahay daqiiqad kasta inuu dagaal ka dhex qarxo labada ciidan.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa horey wacad ugu maray inuu difaaci doono shacabka Galmudug ee ay dhibaatada ku hayaan ciidamada ahlu sunna, mar uu ka hadlayey dagaaladii cuslaa ee ahlu suna ku qaadeen Xeraale oo ay ku baf waayeen dad fara badan oo shacab ay ka mid ahaayeen.